Ciiddamada Ammaanka Uganda oo heegankii ugu dambeeyay la galiyay – idalenews.com
Falalka qaraxyada lagu riiqmay ee ka dhacay Magaaladda Muqdisho, ayaa sababay inay qaar ka mid ah Dowladaha ay Ciiddamadda ka joogaan Somalia ay adkeeyaan Ammaanka dalalkooda.
Sarkaal ka tirsan Boliska dalka Uganda oo lagu magacaabo Charles Birungi ayaa sheegay inay Ciiddamadda Ammaanka xaallad heegan ku jiraan, si ay uga hortagaan Falkii qaraxyadda ee Argagixisadda ka geysteen magaalladda Kampala bishii July ee sannadkii 2011-kii.
Sarkaalkaasi waxa kaloo uu tilmaamay inay Boliska heegan u yihiin inay ka hortagaan fal kasta oo Argagixiso ah, isagoo xusay in Ciiddamadda ku hubeysan yihiin hub loogu talagalay in lagula dagaalamo Argagixisadda.
Mas’uulkaasi ayaa waxa uu hadalkaasi ka sheegay Tababar u furmay Saraakiil ka kala socota Boliska La-dagaalanka Argagixisadda ee dalalka Bariga iyo Bartamaha Afrika, kaasi oo lagu baranayo Xeelladaha looga hortegi karo Falalka Argagixsadda.
Tababarkaasi oo socon doona muddo saddex Toddobaad ayaa waxaa ka qeybgalayo 11-Xubnood oo ka kala socda Boliska dalalka Somalia, Uganda, Djibouti, Kenya, Sudan, Ethiopia, Eritrea, Ruwanda, Seychelles, Burundi iyo Tanzania.
(DAAWO SAWIRADDA). Qalabkii loo adeegsaday Qaraxii ka dhacay Magaaladda Boston ee Dalka Maraykanka